Lions Club District 403 B 2 Governora vaovao i Georges Chane-Tune
Nifarana omaly tetsy amin�ny hotel Carlton Anosy, rehefa naharitra telo andro ilay kongresy goavambe nokarakarain�ny fikambanana Lions Club District 403 B 2.
Firenena mpikambana dimy tamin’ny enina no nandray anjara tamin’izany ka ankoatra ny fanaovana jery todika ny asa vita hahafahana mibanjina ny ho avy dia nisy ihany koa ny fifidianana izay ho governora vaovao sy ireo lefiny roa hitantana ny fikambanana mandritra ny herintaona. Voafidy tamin’izany Andriamatoa Georges Chane-tune avy atsy amin’ny Nosy rahavavy La Réunion. Avy atsy amin’ny Nosy rahavavy Maurice kosa ny lefiny voalohany dia Andriamatoa Cheong Tin. Lasantsika teratany Malagasy ny toeran’ny lefitra faharoa. Rakotomalala Nifanja no nitsikian’ny vintana, izay filoha tale jeneralin’ny orinasa QMM. Vonona ireto tompon’andraikitra voafidy ireto ny hanao ny tsara kokoa hatrany noho ny teo aloha, indrindra fa ny fanasoavam-bahoaka. Any Maurice indray moa no hotanterahina ny kongresy andiany faha-13 amin’ny taona 2018 ho avy io.